वातावरणको Lay तह, तिनीहरू के हुन्? तिनीहरू केको लागि हुन्? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
स्रोत: https://bibliotecadein exploaciones.wordpress.com/ciencias-de-la-tierra/las-capas-de-la-atmosfera-y-su-contaminacion/
हामीले अघिल्लो पोष्टमा देख्यौं, ग्रह पृथ्वी यससँग धेरै आन्तरिक र बाहिरी तहहरू छन् र चार उप-प्रणालीहरू मिलेर बनेको छ। को पृथ्वी को तहहरु तिनीहरू भू-क्षेत्रको उपप्रणालीमा थिए। अर्कोतर्फ, हामीसँग थियो जैव क्षेत्र, पृथ्वीको त्यो क्षेत्र जहाँ जीवनको विकास हुन्छ। जलविद्युत पृथ्वीको अंश थियो जहाँ पानी अवस्थित छ। हामीसँग केवल पृथ्वीको अन्य उपप्रणाली, वातावरण छ। वातावरण को तहहरु के हुन्? यसलाई हेरौं।
वातावरण पृथ्वीको वरिपरि रहेका ग्यासहरूको तह हो र यसमा विभिन्न प्रकार्यहरू छन्। यी कार्यहरू मध्ये बाँच्न आवश्यक अक्सिजनको मात्राको आवासको तथ्य हो। वायुमण्डलमा जीवित प्राणीहरूका लागि रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको सौर किरणहरू र साना meteorites वा asteroids जस्ता अन्तरिक्षबाट बाह्य एजेन्टहरूबाट हामीलाई जोगाउनु हो।
1 वातावरणको संरचना
2 वातावरण को तहहरु के हुन्?
3 वातावरण को इतिहास
वातावरण विभिन्न सांद्रताहरुमा विभिन्न ग्यासहरु बाट बनेको छ। यो प्राय: बनेको हुन्छ नाइट्रोजन (% 78%), तर यो नाइट्रोजन तटस्थ छ, त्यो हो, हामीले यसलाई सास दिन्छौं तर हामी यसलाई मेटाबोलिज गर्दैनौं र यसलाई कुनै पनि चीजको लागि प्रयोग गर्दैनौं। के हामी बाँच्नको लागि प्रयोग गर्छौं २१% अक्सिजन पाइयो। एनारोबिक जीवहरू बाहेक यस ग्रहमा भएका सबै जीवित प्राणीहरूलाई बाँच्नको लागि अक्सिजन चाहिन्छ। अन्तमा, वातावरण छ धेरै कम एकाग्रता (१%) पानीका बाफ, अर्गोन र कार्बन डाइअक्साइड जस्ता अन्य ग्यासहरूबाट।
हामीले यस लेखमा हेर्‍यौं वायुमंडलीय दबाव, हावा भारी छ, र त्यसैले त्यहाँ वायुमण्डलको तल्लो तहहरूमा अधिक हावा छ किनभने माथिबाटको हावाले हावालाई तल धकेल्छ र सतहमा न्यानो हुन्छ। यो त्यस कारणले हो वायुमण्डलको कुल जनको% 75% यो पृथ्वीको सतह र उचाईमा पहिलो ११ किलोमिटरको बीचमा छ। जब हामी उचाईमा बढ्छौं, वातावरण कम घन र पातलो हुन्छ, तथापि, त्यहाँ कुनै प lines्क्तिहरू छैनन् जसले वातावरणको विभिन्न तहहरू चिन्ह लगाउँदछ, बरु संरचना र परिस्थितिहरू परिवर्तन हुन्छन्। कर्मनको रेखाकरिब १०० किलोमिटर उचाइ, पृथ्वीको वायुमण्डलको अन्त र बाह्य अन्तरिक्षको सुरुवात मानिन्छ।
वातावरण को तहहरु के हुन्?
हामीले अघिल्लो पटक टिप्पणी गरिसकेका छौं, जसरी हामी माथि बढ्दै जान्छौं, हामी वातावरणको विभिन्न लेयरहरूको सामना गरिरहेका छौं। प्रत्येक यसको संरचना, घनत्व र प्रकार्यको साथ। वातावरणको पाँच तहहरू छन्: ट्रपोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फियर, मेसोफेयर, थर्मोफेयर र एक्सोस्फीयर।
वातावरण को तहहरु। स्रोत: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
वातावरणको पहिलो तह ट्रोपोस्फीयर हो र हो पृथ्वीको सतहको नजिकै र त्यसकारण, यो त्यस लेयरमा छ जुन हामी बाँच्दछौं। यो समुद्री सतहदेखि करीव १०-१-10 किलोमिटर उचाईमा फैलन्छ। यो ट्रपोस्फीयरमा छ जहाँ जीवनको विकास ग्रहमा हुन्छ। ट्रपोस्फीयर बाहिरका सर्तहरू जीवनको विकासलाई अनुमति नदिनुहोस्। तापक्रम र वायुमण्डलीय चाप कम हुँदै गइरहेको छ ट्रपोस्फीयरमा हामी उचाई बढायौं।
मौसमविज्ञानी घटनाहरू जुन हामीलाई थाहा छ ती ट्रोपोस्फीयरमा हुन्छ, किनकि त्यहाँबाट बादलहरू विकास हुँदैनन्। यी मौसमविद् घटनाहरू ग्रहको विभिन्न क्षेत्रमा सूर्यको कारण असमान तापनले बनेको हो। यो अवस्थाले निम्त्याउँछ धारा र बतासको संवहन, जुन दबाव र तापमान परिवर्तनको साथ हो, आँधीबेहरी आँधीबेहरीलाई जन्म दिन्छ। हवाइजहाजहरू ट्रोपोस्फीयर भित्र उड्छन् र जैसा कि हामीले अगाडि उल्लेख गर्यौं ट्रपोस्फीयर बाहिर कुनै बादल आउँदैन, त्यसैले त्यहाँ पानी पर्दैन वा आँधीबेहरी हुँदैन।
मौसम जहाँ हामी बस्छौं ट्रपोस्फीयरमा घटनाहरू घट्छन्। स्रोत: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
ट्रोपोसियरको उच्च भागमा हामी फेला पार्दछौं एक सीमा तह ट्रोपोज यो सीमा तहमा, तापमान धेरै स्थिर न्यूनतम मानमा पुग्छ। यसैले धेरै वैज्ञानिकहरूले यसलाई यो लेयर भन्छन् "थर्मल लेयर" किनकि यहाँबाट ट्रपोस्फीयरमा रहेको पानीको बाफ बढ्न सक्दैन किनकि यो बाफबाट बरफमा परिवर्तन हुँदा फस्छ। यदि ट्रोपोपजका लागि होईन भने, हाम्रो ग्रहले हामीले पानी गुमाउन सक्छ किनकि यो वाष्पीकरण र बाह्य अन्तरिक्षमा सर्छ। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि ट्रोपोपज एक अदृश्य बाधा हो जसले हाम्रो अवस्थालाई स्थिर राख्छ र पानीलाई पहुँचमा राख्न दिन्छ।
वायुमण्डलको तहहरूको साथ अघि बढ्दै, हामी अब स्ट्र्याटोस्फियर पाउँछौं। यो ट्रोपोपजबाट फेला पर्दछ र १०-१ km किलोमिटर उचाईदेखि ---10० किलोमिटरसम्म फैलन्छ। तल्लो भागको तुलनामा स्ट्र्याटोस्फीयरको तापक्रम माथिल्लो भागमा बढी हुन्छ किनकि यो उचाई बढ्दै जाँदा यसले बढी सौर्य किरणहरू अवशोषित गर्दछ र तपाईंको तापक्रम बढ्छ। त्यो भन्नु पर्ने हो, उचाईमा तापक्रमको व्यवहार ट्रपोस्फीयरमा विपरित हुन्छ। यो स्थिर तर कम सुरु हुन्छ र उचाई बढ्दै जाँदा तापक्रम बढ्छ।
प्रकाश किरणहरु को अवशोषण को कारण छ ओजोन तह जुन and० र km० किलोमिटरको उचाई बीचमा छ। ओजोन तह बाहिरी वातावरणको तुलनामा स्ट्र्याटोस्फेरिक ओजोनको एकाग्रता बढी रहेको क्षेत्र बाहेक अरू केही छैन। ओजोन के हो सूर्यको हानिकारक किरणहरूबाट हामीलाई जोगाउँछतर यदि ओजोन पृथ्वीको सतहमा देखा पर्छ, यो एक मजबूत वायुमंडलीय प्रदूषक हो जसले छाला, श्वासप्रश्वास र हृदय सम्बन्धी रोगहरू निम्त्याउँछ।
स्ट्र्याटोस्फीयरमा हावाको ठाडो दिशामा चालै पुग्नै नसकिने भए पनि क्षितिज दिशामा चल्ने हावाहरू पुग्न सक्दछ। अक्सर २०० किमी / घन्टा। यस बतासको साथ समस्या यो छ कि कुनै पनि पदार्थ जुन स्ट्र्याटोस्फीयरमा पुग्छ सम्पूर्ण ग्रहमा विसरित हुन्छ। यसको एक उदाहरण सीएफसीहरू हुन्। क्लोरीन र फ्लोरीन मिलेर बनेका यी ग्याँसहरूले ओजोन तहलाई नष्ट गर्दछन् र स्ट्र्याटोस्फियरबाट कडा बतासका कारण ग्रहमा फैलियो।
स्ट्रेटोस्फीयरको अन्त्यमा हो स्ट्रेटोपोज। यो वातावरणको क्षेत्र हो जहाँ ओजोनको उच्च सांद्रता समाप्त हुन्छ र तापक्रम एकदम स्थिर हुन्छ (० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि)। स्ट्रिटोपोज एक हो जुन मेसोफियरमा मार्ग दिन्छ।
यो वायुमण्डलको तह हो जुन km० किलोमिटरदेखि बढी वा कम km० किलोमिटरसम्म फैलन्छ। मेसोफेयरमा तापक्रमको व्यवहार ट्रपोस्फीयरसँग मिल्दोजुल्दो छ किनकि यो उचाईमा ओर्लन्छ। चिसो भए पनि वातावरणको यो तह, meteorites रोक्न सक्षम छ जसरी तिनीहरू वायुमण्डलमा खस्छन् जहाँ उनीहरूले जलाउँछन्, यसरी तिनीहरू रातको आकाशमा आगोका निशानहरू छोड्दछन्।
Mesosphere वायुमंडलको पातलो तह हो, पछि कुल एयर मासको ०.१% मात्र समावेश गर्दछ र यसमा तापक्रम-degrees to डिग्रीसम्म पुग्न सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाहरू यो तहमा हुन्छन् र हावाको कम घनत्वका कारण, विभिन्न टर्बुलेन्सहरू गठन हुन्छन् जसले अन्तरिक्षयानलाई पृथ्वीमा फर्कने क्रममा मद्दत गर्दछ, किनकि तिनीहरूले पृष्ठभूमि वायुहरूको संरचना देख्न थाल्छन् न कि एरोडायनामिक ब्रेकले। जहाजको
Mesosphere को अन्त मा छ मेसोपोज। यो बाउन्ड्री लेयर हो जसले मेसोफियर र थर्मामंडल छुट्याउँछ। यो लगभग-85-90 ० किलोमिटर उचाईमा अवस्थित छ र यसमा तापक्रम स्थिर र धेरै कम छ। केमिल्युमिनेसेन्स र एरोल्युमिनेसेन्स प्रतिक्रियाहरू यो तहमा हुन्छन्।
यो वातावरणको फराकिलो तह हो। यसले विस्तार गर्दछ -०-80० किलोमिटर 90 km० किमीसम्म। यस ठाउँमा, सायद कुनै हावा बाँकी छ र यस तहमा रहेको कणहरू पराबैंगनी विकिरण द्वारा ionized छन्। यो लेयर पनि भनिन्छ आयनोस्फीयर यसमा हुने आयनहरूको टकरावका कारण। आयनोस्फीयरमा ठूलो प्रभाव छ रेडियो तरंगहरूको प्रसार। आयनस्थल तर्फ ट्रान्समिटरबाट विकिरित उर्जाको एक भाग आयनयुक्त वायु द्वारा अवशोषित हुन्छ र अर्को अपवर्तित, वा परावर्तित हुन्छ, जुन पृथ्वीको सतह तर्फ फिर्ता हुन्छ।
तापक्रममा तापक्रम धेरै उच्च छ, पुग्ने छ हजारौं डिग्री सेल्सियस सम्म। वायुमण्डलमा फेला परेका सबै कणहरू सूर्यको किरणबाट उर्जाको साथ अत्यधिक चार्ज हुन्छन्। हामीले यो पनि फेला पारेका हुन्छौं कि ग्यासहरू समान रूपमा तितरबितर भएन जस्तो वातावरणको अघिल्लो तहहरूमा हुन्छ।
तापक्रममा हामी पाउँछौं म्याग्नेटोस्फीयर। यो वातावरणको त्यो क्षेत्र हो जहाँ पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रले सौर्य हावाबाट हामीलाई जोगाउँछ।
वातावरणको अन्तिम तह बाहिरी भाग हो। यो सतह पृथ्वीको सतहबाट सबैभन्दा टाढा हो र यसको उचाईका कारण, यो सबैभन्दा अनिश्चित र यसैले आफूलाई वायुमण्डलको तह मानिदैन। अधिक वा कम यो height००-600०० किलोमिटरको उचाईमा ,800 ०००-१०,००० किमीसम्म फैलन्छ। वातावरणको यो तह के हो ग्रह पृथ्वीलाई बाह्य अन्तरिक्षबाट अलग गर्दछ र यसमा परमाणुहरू भाग्छन्। यो प्राय जसो हाइड्रोजनबाट बनेको हुन्छ।
एक्स्पियरमा स्टारडस्टको ठूलो मात्रा रहेको छ
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, वातावरण को तहहरु मा विभिन्न घटनाहरु हुन्छन्s र बिभिन्न प्रकार्यहरू छन्। वर्षाबाट, हावाहरू र दवावहरूबाट ओजोन तह र अल्ट्राभायोलेट किरणहरू, वायुमण्डलको प्रत्येक तहको यसको कार्य हुन्छ जसले ग्रहलाई जीवन दिन्छ जुन हामीलाई थाहा छ।
वातावरण को इतिहास
La वातावरण जुन हामी आज जान्दछौं यो सँधै यस्तो भएको छैन। आज सम्म पृथ्वी ग्रहको गठन भएको लाखौं वर्ष बितिसकेको छ र यसले वातावरणको संरचनामा परिवर्तन ल्याएको छ।
अस्तित्वमा रहेको पहिलो पृथ्वीको वायुमण्डल इतिहासको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा लामो समय सम्म चल्ने वर्षा बाट उत्पन्न भयो जसले महासागरहरुको गठन गर्यो। जीवन भन्दा पहिले वातावरण को संरचना को रूप मा हामी जान्दछौं कि यो उठ्यो धेरै जसो मिथेन बाट बनेको थियो। पछि, यो गर्छ २.2.300 अरब वर्ष भन्दा बढीयी अवस्थाहरूबाट बाँचेका जीवहरू जीवहरू थिए methanogens र anoxic, कि, तिनीहरूलाई बाँच्नको लागि अक्सिजनको आवश्यकता थिएन। आज मेथेनोजेन तालहरू वा गाईहरूको पेटमा तल हुन्छ जहाँ अक्सिजन हुँदैन। पृथ्वी ग्रह अझै पनि कलिलो थियो र सूर्यले थोरै चम्किरहेको थियो, यद्यपि वायुमण्डलमा मिथेनको एकाग्रता थियो प्रदूषणको साथ आज भन्दा times०० गुणा बढी। जुन ग्रीन हाउस प्रभावमा अनुवाद गरिएको विश्वव्यापी तापक्रम बढाउनको लागि पर्याप्त सक्षम छ, किनकि मिथेनले धेरै तातो राख्छ।
वायुमण्डलको संरचना अनौक्सिक हुँदा मिथेनोजेनहरूले पृथ्वी शासन गरे। स्रोत: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
पछि, को प्रसार संग साइनोबाक्टेरिया र शैवाल, अक्सिजनले भरिएको यो ग्रह र वातावरणको संरचना बदलेसम्म, अलि-अलि गर्दै, यो आज हामीसँग भएको छ। प्लेट टेक्टोनिक्सलाई धन्यवाद, महादेशहरूको पुनर्गठनले पृथ्वीको सबै भागहरूमा कार्बोनेट वितरणमा योगदान पुर्‍यायो। र यसैले वातावरण वातावरण घटाउने वातावरणबाट एक अक्सिडाईजिंगमा परिणत भएको थियो। अधिक वा कम १ concent% को स्थिर एकाग्रतामा रहँदासम्म अक्सिजन सांद्रताले उच्च र तल्लो चुचुरोहरू देखाउँदै थियो।
मिथेन बाट बनेको आदिम वातावरण। स्रोत: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » वातावरण को तहहरू
नमस्कार, यदि तापक्रम हजारौं डिग्री सीमा पुग्यो भने यो कसरी सम्भव छ कि कुनै अन्तरिक्षयान यसबाट पार गर्न सक्थ्यो?
तापक्रम पछि तापक्रम के हो?
तपाईंको उत्तरको लागि अग्रिम धन्यवाद
लियोनेल भेन्स मर्गस भन्यो
पेड्रो .. कोही पनि कहिल्यै बाहिर निस्केन!
सबै कुरा ठूलो झूटको कथा हो ... जारी गर्ने भिडियोहरू हेर्नुहोस् वा सबै नक्कली ..
वा अझ राम्रो, पृथ्वीको CGI छविहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ एक वास्तविक फोटो कहिल्यै थियो र कसैले कहिल्यै उपग्रह परिक्रमण देखेको छैन .. मलाई भाई बताउन दिनुहोस् .. हामी धोकामा परेका छौं।
LEONEL VENCE MURGAS लाई जवाफ दिनुहोस्
The तापक्रममा हामी म्याग्नेटोस्फीयर पाउँछौं। यो वातावरणको त्यो क्षेत्र हो जहाँ पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रले सौर्य हावाबाट हामीलाई जोगाउँछ। "
मलाई लाग्छ कि यो वाक्यमा उनीहरूले चुम्बकीय क्षेत्र राख्नु पर्छ न कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र।
Apodemus लाई जवाफ दिनुहोस्
जानकारी धेरै राम्रो छ र धेरै राम्रोसँग वर्णन गरिएको छ ... धेरै धेरै धन्यवाद ... हामी अध्ययन गर्नेहरूका लागि धेरै उपयोगी useful
नह लाई जवाफ दिनुहोस्
म ब्यक्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले हामीलाई त्यस्तो स्पष्ट र साधारण तरिकाले आफूलाई सूचित गर्न अनुमति दिन्छ। म यस पृष्ठलाई सिफारिश गर्दछु, कलेजमा अध्ययन गर्ने हामी सबैका लागि यो धेरै उपयोगी छ। धेरै धेरै धन्यवाद
लुसियाना रुएडा लुना भन्यो
ठिकै पृष्ठ राम्रो छ तर त्यहाँ झूटा कुराहरू छन् तर यो राम्ररी वर्णन गरिएको छ व्याख्याको लागि धन्यवाद thanks
लुसियाना रुउदा लुनालाई जवाफ दिनुहोस्
पेड्रोलाई जवाफ दिँदै, जहाजहरूले यी तापक्रमहरूलाई थर्मल शिल्डलाई धन्यवाद दिन सक्छ
सामान्यतया फिनोलिक सामग्री बाट बनेको।
मलाई एक प्रश्न बताउनुहोस्
किरिटोलाई जवाफ दिनुहोस्
डानिएला बीबीए भन्यो
यो धेरै राम्रो जानकारी हो - यसले हामी सबैलाई मद्दत गर्न सक्छ जसले मलाई अध्ययन गर्थ्यो मलाई लाग्यो कि त्यहाँ चार तहहरू छन् र त्यहाँ 😂😂😂 😂😂😂 थिए
Daniela BB😂 लाई जवाफ दिनुहोस्
रेबेका मेलेन्डेज भन्यो
म खुला हाई स्कूल पढ्छु र जानकारीले मलाई धेरै मद्दत गर्‍यो र यो धेरै राम्ररी वर्णन गरिएको छ, धन्यवाद
रेबेका मेलेन्डेजलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै राम्रो धन्यवाद।
हेक्टर मोरेनो भन्यो
यति धेरै छलछाम, सबै कुरा झूटा हो साथीहरू, झूटा शिक्षाको सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणाली पनि अन्तरिक्षमा जान सक्दैन, पूरै कभर-अप, फ्ल्याट अर्थ अनुसन्धान गर्न र उठ्न सक्छ।
हेक्टर मोरेनोलाई जवाफ दिनुहोस्
क्रिश्चियन रोबर्टो भन्यो
हेक्टर मोरेनो हेर्नुहोस् म विज्ञानमा विश्वास गर्दछु तर तपाईंको प्रश्नहरू तपाईंको कल्पनाभन्दा बाहिर खोल्नुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस् कि किन ग्रह सृष्टि गरिएको थियो शैक्षिक प्रणालीको सीमितता छ तर यदि हामीसँग यो छैन भने हामीले पहिले नै पत्ता लगायौं कि पृथ्वी समतल छ वा छैन र यो संसारको सत्यता तर हामीसँग अहिले त्यस्तो प्रविधि छैन, तपाईं जवाफ दिन सक्नुहुन्न, तपाईं भन्नुभएको छ कि हामी पृथ्वी छोडन सक्षम भएका छैनौं किनकि तपाईं यो भन्नुहुन्छ कि यो कभर-अप होइन, यो सत्य हो किनभने अन्यथा कुनै व्यक्तिले हामीलाई केही बताएको थिएन, उसले अचम्म माने र भन्यो कि यस्तो यदि पृथ्वी सपाट छ र त्यहाँबाट यो सिद्धान्त शुरू भयो कि यदि हामी सपाट वा गोलो पृथ्वीमा बस्यौं र तिनीहरूले हामीलाई एउटा सरल जवाफ दिए भने यो गोलाकार हो किनभने यदि यो सपाट भएमा सबैजना पृथ्वीको शक्तिले आकर्षित हुने थिए र सन्तुलन गुमाउने थियो। पृथ्वी किनभने केहि स्थानहरूमा यो शुद्ध चिसो गर्मी रात को दिन हुनेछ र त्यो प्रकारको सन्तुलन खराब हुनेछ किनभने हामी पृथ्वीमा घुमाउनुपर्दछ र संसारको चारैतिर चिसो चिसोको वरिपरि छ भने कोही त्यस्तो हुँदैन।म्याग्नेटिजमको एकल बिन्दुमा आकर्षित भयो र म केवल १ 13 बर्षको भएँ म4बर्षदेखि जागा रहें जुन तपाईको प्रश्नको उत्तर दिन सक्छ वा अन्त हुँदैन: 3: v
क्रिश्चियन रोबर्टोलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्दैन कि तापक्रममा एक हजार डिग्री पुगेको छ, पृथ्वीको चारैतिर घुम्ने चन्द्रमा लगभग + -१160० डिग्री पुग्नु तार्किक छैन, र पारामा सूर्यको नजिकको तापक्रममा मलाई लाग्छ कि यो चारैतिर घुम्छ। degrees०० डिग्री मा अधिकतम १००० मा, त्यसैले यो तार्किक छैन ...। यो एक टाइपो हो जस्तो मलाई लाग्छ।
एडवि R रोड्रिग्ज भन्यो
नमस्कार, जानकारीको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यो पृष्ठ मनपर्दछ, यसले सँधै मलाई स्कूलका कामहरूमा मद्दत गर्दछ र जानकारी उपयोगी छ।
एडवि R रोड्रिगिजलाई जवाफ दिनुहोस्
लिसेन्ड्रो माइलेसी भन्यो
जुआनलाई जवाफ दिँदै। तापक्रम सूर्यको किरणमा निर्भर गर्दछ। एकै तापक्रमको बारेमा कुरा गर्नु भनेको तपाईंले गर्नु भएको गल्ती हो। यो धेरै फरक हुन्छ यदि सौर विकिरण आउँछ वा हुँदैन। उदाहरण को लागी, चन्द्र अवतरण सूर्यको किरणमा बनेको छ, तर चिसो जाडो छ।
Lisandro Milesi लाई जवाफ दिनुहोस्
जुडिथ हेरेरा भन्यो
मलाई यो मनपर्‍यो, जानकारी राम्रो छ र पोखरी, धेरै धेरै धन्यबाद 🙂
जुडिथ हेररालाई जवाफ दिनुहोस्
एलेजेन्ड्रो अल्भारेज भन्यो
सबैलाई नमस्कार… !!!
म यस साइटमा नयाँ छु, धेरै धेरै धन्यबाद।
म पृथ्वीको विभिन्न सक्षम को बारे मा एक लेख पढ्दै थिए र मैले रिपोर्ट एकदम पूर्ण र गम्भीर पाए।
एट्टी अलेजेन्ड्रो * IRON * ALVAREZ .. !!!
Alejandro alvarez लाई जवाफ दिनुहोस्